Archive du 20170519
Banky foiben�i Madagasikara Misy volabe avoaka an-tsokosoko ?
Misy tranga mampiahiahy ao amin�ny banky foiben�i Madagasikara Antaninarenina amin�izao fotoana. Raha ny loharanom-baovao iray dia re fa misy vola be avoaka mangingina avy ao.
Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP) Mitaky ny hisamborana ny praiminisitra
Tsy mety tonga ao amin�ny minisiteran�ny atitany tarihin�ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly mihitsy ny fanadihadiana mikasika ireo raharaha misaringotra amina fanodinkodinana tsenam-panjakana hatreto, hoy ry zareo avy eo anivon�ny dinika ho fanavotam-pirenena na DFP.
Depiote teny Tsimbazaza Tsy nahara-baovao ny ankamaroany
Noho ny fahasahiranana amin�ny fandinihana ireo volavolan-dal�na efa am-pelatanan�izy ireo sy noho ny fanatrehan�ny maro tamin�izy ireo ny fandevenana ny nofo mangatsiakan�ny vadin�ny depiote namany,
Mbola ao anaty krizy i Madagasikara. Tsy maintsy atao aloha ny fampihavanana vao irosoana ny fifidianana, hoy i Marc Ravalomanana omaly hariva raha nidinika tamin�ireo iraka manokan�ny SADC teny amin�ny trano fonenany teny Faravohitra izy.
Taratasin�i Jean Kilalaon�olon-dehibe
Tapatapa-tsinay mihitsy aho izao ry Jean mieritreritra ity lalao ifanaovanareo sy ry Jeanne manja kely ity ! Miarahaba anao aloha fa dingana goavana dia goavana mihitsy izao vitanao izao e !
Mpiasan�ny CUA Halamina ny fisotroan-dronono
Notanterahina teny amin�ny Lapan�ny tan�na Analakely omaly zoma 18 mey 2017 maraina ny fihaonana teo amin�ny talen�ny sampandraharaha misahana ny mpiasa,
Volana, mararin�ny voa Mila fanampiana maika
Tsy mifidy taona intsony ny aretin�ny voa eto amintsika. Ny fanaovana transplantation any Inde ihany no hany vahaolana tokana ho an�ireo marary maniry ny hiaina maharitra eto an-tany.
Filankevitry ny Eveka eto Madagasikara Mila fiovam-penitra mahery vaika
Manamafy izay efa nambarany hatrany mikasika ny fahitany ny raharaham-pirenena ankehitriny ry zareo avy eo anivon�ny filankevitry ny Eveka eto Madagasikara fa tsy mitsahatra mikorosy fahana amin�ny lafiny rehetra ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Fanjakana mivadibadi-dela !
Mivadibadi-dela lava ny fanjakana Rajaonarimampianina amin�ity raharaha mahasaringotra ny mpanolotsain�ny filoha ity.
Fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka Hifanome tanana ny minisitera sy ny PSI ary ny Airtel
Hiara-kiasa akaiky manomboka izao ny minisiteran�ny fahasalamam-bahoaka sy ny PSI Madagascar ary ny tambajotram-pifandraisana Airtel.
Filohan�ny SMM Hogadraina fa manelingelina ?
Namoaka fanambarana ny Birao mpitantana ny Sendikan�ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) omaly.
Fotodrafitrasam-pambolen�Atsimondrano Mila hatsaraina,hoy ny depiote Voahanginiaina R
Mila fanatsarana amin�izao vanim-potoanan�ny mainandro izao ireo fotodrafitrasam-pambolena nahitana fahasimbana tamin�ny fotoana nisian�ny andro ratsy ireny eny amin�iny faritry ny distrikan�Atsimondrano iny,
FIM andiany faha-12 Hanome tolotra miavaka ny banky BNI
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly alakamisy, haharitra efatra andro ilay Foara Iraisam-pirenena eto Madagasikara andiany faha-12 tontosaina eny amin�ny Forello Expo Tanjombato.
Distrikan�i Fenoarivobe Kaominina 1 amin�ny 10 no mba milamindamina
Nambaran�ny depiote Ranaivoson Andrianavalona Fanomezanjaka voafidy tany Fenoarivobe fa anisan�ireo faritra mahamay amin�ny tsy fisian�ny fandriampahalemana ao aminy ny distrika tantaniny, Faritra Bongolava.